Imibuzo yokuqala engama-57 eFunyanwa, kodwa yigcine imnandi - Ukuthandana Conversation Topics
Imibuzo yokuqala engama-57 eFunyanwa, kodwa yigcine imnandi
Umhla wokuqala imibuzo inokukunceda ufunde kancinci ngakumbi malunga nomntu onokubakho okhethekileyo kwaye suss ukuba uyafuna ukuya kumhla wesibini kunye nabo. Kuba ukubonakala kokuqala kuthetha ukuba yonke into, ufuna ukuqiniseka ukuba ubuza imibuzo efanelekileyo uhlobo lwemibuzo ukuze unxibelelane kwangoko nomhla wakho.
Imibuzo eQalayo yomhla wokuNciphisa uxinzelelo
Imibuzo ehlekisayo inokunceda ukukhanyisa imeko yomhla wokuqala kwaye ikunike iinkumbulo ezintle zokujonga emva ukuba ubudlelwane bakho obutsha buhlala. Cinga ngemibuzo eza kugcina ukukhanya kwemood kodwa isaya kukunika iimpendulo ezikunika ulwazi olubalulekileyo malunga nomhla wakho kwaye umenze azive ekhululekile.
Ukuba uziva unesidingo sokubaleka lo mhla, ungayenza njani ngaphandle kokuba krwada?
Yintoni enye into epokothweni / kwisipaji sakho okwangoku enokundenza ndihleke?
Yeyiphi ingoma yengoma ebambeke entlokweni yakho ngoku?
Yeyiphi imovie oneentloni ukuyivuma uyonwabele?
Yeyiphi into engathandekiyo yokuqalisa incoko ekufuneka siyizamile kuqala, imozulu okanye ukutya apha?
Lithini ibali lakho lokuya epatini?
Nguwuphi owona mhla wokuqala ombi owakha waba nawo?
Yeyiphi eyona nto uyonwabileyo oyenzileyo ngelixa ulotywe?
Yeyiphi eyona nto ungayamkelekanga kwezentlalo?
Yintoni into oyithandayo yasekhaya?
Ukuba unokunikezela ngesixhobo esinye sonyaka, ingayintoni?
Yintoni engaze isilele ukuhlekisa?
Yeyiphi eyona nto imbi kangaka oyithengileyo?
Iingcamango ezi-8 ezimangalisayo zeZimanga zothando
Ukuyila ngokuYazi Imibuzo yoMhla wokuqala
Phuma kubo bonke abanye abaviwa abanobudlelwane ngokubuza imibuzo yoyilo ethetha ngobuntu bakho kwaye ikuncede wazi umhla wakho. Khangela iindlela zokuphamba imibuzo yomhla wokuqala kwimibuzo yakho, izinto ozithandayo kunye neenjongo zobomi.
Ukuba ubunokukhetha uhlobo olunye lomculo oza kuwudlala ngasemva kobomi bakho bonke, ungakhetha ntoni?
Yeyiphi ixesha elide owake walichitha ubukele i-Netflix?
Ngaba kungcono ukuba uhlambe yonke imihla okanye uvunyelwe ukuba uhlambe rhoqo kwiintsuku ezintathu?
Sesiphi isilwanyana esisemngciphekweni onokusigcina ukuba ubunokukhetha esinye?
Sithini isihloko sokuqala sencwadi esiza engqondweni yakho ngoku?
Leliphi elona xwebhu linomdla okhe walibona?
Ukuba singakhwela inqwelomoya ngoku, ingaba siyaphi?
Ucinga ukuba leliphi elona xesha lilungileyo lomculo?
Kukuphi ukutya okuthandayo abakuthiyileyo abantu?
Luthini uluvo lwakho ngeenkwenkwezi?
Yintoni eyona mfihlelo yakho imdaka?
Ngaba ungazijonga njengentsasa okanye umntu wangokuhlwa?
Bangaphi abahlobo bakho osenyongweni onokuthi unabo?
Leliphi elona cebiso lilungileyo owakha walinikwa?
Imibuzo enomdla yokwazi uMhla wakho
Uninzi lwabantu luyazi ukuba lulindele ntoni kwincoko yomhla wokuqala, ke uya kufuna ukugcina umhla wakho kwiinzwane zabo ngokubuza imibuzo enomdla, njengayo nayiphi na kwezi.
Yeyiphi indawo okhe wayindwendwela ongafuniyo ukuphindela kuyo?
Yeyiphi eyona holide yakho yosapho uyithandayo njengomntwana?
Yeyiphi eyona nto imbi uyenzileyo emsebenzini?
Yeyiphi i-quirk onayo enokucaphukisa abantu kakhulu?
Yeyiphi inkalo yakho onqwenela ukuba abantu bayincome rhoqo?
Yeyiphi into oyithandayo onqwenela ukuba ubengcono kuyo?
Wagqibela nini wenahlukenenomntu?
Likhangeleka njani ikhaya lamaphupha akho?
Ngaba uzijonga ngaphezulu kobuchopho obuchanekileyo okanye uhlobo lwengqondo lasekhohlo lomntu?
Yeyiphi inkumbulo yesiqhelo ebambelele kuwe iminyaka kubonakala ngathi akukho sizathu sokuba?
Ucinga ukuba luphi ulwimi lwakho lothando?
Yintoni into yokuqala oqhele ukuyiphawula ngomntu?
Ubonakala njani usuku lwakho lomsebenzi?
Yeyiphi indibaniselwano yakho oyithandayo engaqhelekanga?
Imibuzo enzulu yokubuza ngomhla wokuqala
Qala ngokubuza imibuzo efuna ukubonwa ukusuka kumhla wakho ngaphandle kokubenza bazive bengakhululekanga. Le mibuzo ifanele ibe malunga nobuntu bomhla wakho, iinjongo, kunye neembono, hayi ezona mfihlelo zinzulu, ezimnyama kakhulu, ukuze uqale ukubona indlela eningafanelana ngayo nobabini.
Ngawaphi amagama amathathu anokusetyenziswa ngumama wakho ukukuchaza?
Ngaba umphathi wakho angakukhetha esikhundleni sakhe?
Ukuba unokukhetha kuphela isisa esinye ukuba unikele okanye uvolontiye ubomi bakho bonke, ungakhetha ntoni?
Yeyiphi eyona nkumbulo yakho ihlazo yobuntwana?
Sesiphi kwezona zono zisixhenxe zibulalayo osenza rhoqo?
Luyintoni uloyiko lwakho olukhulu olungenangqondo?
Ungathini oyena mhlobo wakho usenyongweni?
Ibaluleke kangakanani inkolo ebomini bakho?
Luluphi uphawu oluthanda kakhulu kwiqabane?
Xa ndisithi 'uthando,' yeyiphi into yokuqala ethi qatha engqondweni yakho?
Kutheni ucinga ukuba awutshatanga?
Xa ungena kwimpikiswano, injani indlela oqhele ukuphendula ngayo?
Ngaba uyakholelwa ukuba wonke umntu unomntu 'omnye' abenzelwe ukuba babe naye?
Yintoni ebaluleke ngakumbi kuwe-ukusondelelana ngokweemvakalelo okanye ukusondelelana ngokomzimba?
Ngaba ubona phi ubudlelwane bakho obulandelayo buphela (umtshato, ukungakhathali, njalo njalo)?
Ukuba unokuxelela umntu omncinci icebo elinye, ingayintoni?
Ukunxibelelana noMhla wakho
Yonwaba ngale mibuzo kwayefunda ngomntungubani, ukubaizinto zihamba kakuhle, inokuphela njengoiqabane lakho lomphefumlo. Ufuna ukuzama ngandlela zonke ukuba ungazenzi isidenge, kodwa ukuba uyakhubeka ngamazwi akho okanye uthethe into engeyiyo, ungakhathazeki; amathuba okuba omnye umntu enoloyiko malunga nokwenza umbono wokuqala. Ngayo nayiphi na le mibuzo yomhla wokuqala awusoze woyike malunga nokufumana into oza kuyithetha ukwaphula iumzuzu ongathandekiyo wokuthula, Kwaye kuya kufuneka ukwazi ukushiya usuku uziva, ubuncinci, ukusondela kumntu oxoxe naye kangangeeyure.
Imisebenzi Ye Abadala Bridal Party Ubugcisa Imiboniso Yesilayidi Ubambiso Ukubuyiselwa Kwemali Usana Lwezempilo
umyalezo wovelwano wokuphulukana nomyeni
Ungayakha njani i-ramp yenja kumgangatho
ingakanani ivithamin c kwiorenji enye
kungakanani ukutya okunkonkxiweyo ekufuneka ndikondle ikati yam